Bootarka caruurt ee Johnson & Johnson oo kansar laga Qaadayo iyo Gabadh $40milyan oo magdhow ka heshay Shirkada – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Bootarka caruurt ee Johnson & Johnson oo kansar laga Qaadayo...
Bootarka caruurt ee Johnson & Johnson oo kansar laga Qaadayo iyo Gabadh $40milyan oo magdhow ka heshay Shirkada
Haweeney Idaho ah ayaa jimcihii abaalmarin kabadan $ 40 milyan oo magdhow lacageed ah kabixisay dacwad ay haweeney ka gudbisay Johnson & Johnson oo ah aaladda caafimaadka, shirkadda dawooyinka iyo macaamiisha alaabada.
Garsooraha maxkamadda Los Angeles ayaa amar ku siiyay Johnson & Johnson inay bixiyaan $ 40.3 milyan oo loogu talagalay Nancy Capibi, Idaho, nooc ka mid ah kansarka loo yaqaan “mesothelioma,” kansarka la xiriira asbestos ee budada ay soo saarto. Shirkadda.
Sanadkii 2017-kii, 71-jirka Nancy waxaa laga helay cudurka kansarka ee dilaaga ah kaas oo badanaa ku dhaca dahaarka sambabbada, oo tan iyo markii la maray qaliinka, kemotherapy, shucaaca iyo isdifaaca.
In kasta oo sababta dhabta ah ee loo yaqaan ‘mesothelioma’ aan caddayn, oo ay weheliso xaqiiqda in ay ka timid is-beddellada DNA, caddaynta ayaa soo jeedinaysa in asbestos ay dejin karto sambabbada, waxyeello u geysaneyso waxyaabaha hidde ee unugyada halkaas oo horseedi kara horumarka kansarka.
Kansarka Mesothelioma wuxuu saameeyaa qiyaastii 3,000 oo qof sanadkii, taasoo ka dhigaysa wax ka yar 0.3 boqolkiiba dhammaan cudurada lagu ogaado kansarka gudaha Mareykanka, halka Ururka Caafimaadka Adduunka uu u tixgelinayo cudurka loo yaqaan ‘asbestos’ kansarka loo yaqaan ‘Kansarka Kansarka, hunguriga iyo kansarka ugxan-sidaha, iyo sidoo kale mesothelioma.
Heerka badbaadada shanta sano waa 4 boqolkiiba, taasoo la micno ah in boqolkiiba 96 ay dhintaan wax ka yar 5 sano.
“Nancy Capibi waxay u dagaallameysaa nolol maalmeedka sababta oo ah asbestos budada ah Johnson Baby Powder. In kasta oo aan aad ugu faraxsanahay xukunkaan, waxaan ognahay inaan sii wadno dagaalka ka dhanka ah Capibi iyo kuwa kale oo badan oo la soo saaray,” qareenkeeda David Greenstone ayaa ku yiri war-saxaafadeed. Si loo waxyeeleeyo.
Waxaa xusid mudan in in kabadan 14 kun oo dacwadood ay sheeganayaan in budada Johnson Johnson & Johnson ay sababeen cudurada kansarka ugxanta iyo mesothelioma.
Shirkadda caanka ah iyo shirkadda dawooyinka ayaa ka bixisay $ 50 bilyan magdhow sannadihii la soo dhaafay si loogu caddeeyo cudurrada iyo dhaawacyada la xiriira budada.
Labada asbestos tremolite iyo anthophyllite, oo ah laba nooc oo macdano ah, ayaa laga helay budada Johnson & Johnson, iyo sidoo kale sheyga qubeyska, oo labaduba ay adeegsadeen Capibi.
Previous articleAmnesty International calls for the release of all detainees in Yemen
Next articleDaraasad cusub oo lagu ogaadey Halista Hilibka Cas, iyo Faa’iidada Hilibka cad
FARRIIN CAAFIMAAD ka Hor Taga coronavirus